N'agbanyeghị ọrụ gị na ụlọ ọrụ, achọrọ ka ị sonye, ​​hazie ma duzie nzukọ. Ọzụzụ a na-enye gị n'okpuru otu awa usoro ngwaọrụ iji kwadebe nke ọma, bido ma mechie nzukọ gị. N'ime usoro ihe ọmụmụ a ị ga-ahụ ụdị nzukọ dị iche iche, omume nke ndị sonyere na ụfọdụ iwu dị mkpa maka nkwukọrịta.
Ga-amụtakwa ọtụtụ usoro mmemme na nzukọ nzukọ. A na-emezi ọzụzụ a nke ọma site na ọnọdụ nzukọ atọ iji gosipụta ihe ị mụtara. Ọzọkwa, ọnọdụ ndị a ga-enyere gị aka inyocha ihe dị iche iche dị mkpa iji kwadebe nzukọ n'ọnọdụ dị iche iche ...
Onye Nchịkwa Dị elu: Hazie ma jikwaa nzukọ January 11th, 2021Tranquillus
GỤỌ Bụrụ onye njikwa obodo ma nyekwa nkwado gị maka ọrụ gị
gara agaOnye njikwa kacha elu: diagnosisrụ nyocha nyocha
-esonụInye ego nke ụlọ ọganiihu na Nzọụkwụ 8 + 1